31 Yehowa toaa so ka kyerɛɛ Mose sɛ: 2 “Hwɛ, Hur ba Uri wɔ ɔba bi a ɔde Besalel+ a ofi Yuda abusuakuw mu, na ɔno na mabɔ ne din afrɛ no.+ 3 Mede Onyankopɔn honhom bɛhyɛ no mã na wanya nyansa ne ntease ne nimdeɛ a ebetumi ama ɔde ahokokwaw ayɛ adwuma biara.+ 4 Ɔbɛyɛ odwumfo a ɔwɔ sika ne dwetɛ ne kɔbere ho nimdeɛ+ 5 ne adwene a ebetumi ama ɔde abo adi adwini+ na wasen nnua ayɛ nneɛma horow.+ 6 Mede Ahisamak ba Oholiab a ofi Dan abusuakuw mu+ bɛka ne ho, na wɔn a wɔwɔ nimdeɛ nyinaa nso, mede nyansa bɛhyɛ wɔn komam na wɔatumi ayɛ nea mahyɛ wo nyinaa:+ 7 ahyiae ntamadan+ no, adanse adaka+ ne ne mmuaso,+ ne nneɛma a ɛwɔ ntamadan no mu nyinaa, 8 ɔpon no ne ɛso nneɛma,+ sika kaneadua no ne ɛho nneɛma nyinaa,+ ne aduhuam muka,+ 9 ne afɔremuka a wɔbɔ ɔhyew afɔre wɔ so ne ɛso nneɛma nyinaa,+ ne ɛsɛn no ne ne nnyinaso+ no, 10 ne ntade a wɔanwene ne ɔsɔfo Aaron ntade kronkron ne ntade a ne mma de bɛsom sɛ asɔfo,+ 11 ne ɔsrango ne aduhuam a ɛwɔ kronkronbea+ hɔ no. Wɔbɛyɛ nea mahyɛ wo biara.” 12 Yehowa san ka kyerɛɛ Mose sɛ: 13 “Ka kyerɛ Israelfo sɛ, ‘Me homeda no de, monhwɛ sɛ mubedi,+ efisɛ ɛyɛ sɛnkyerɛnne a ɛda me ne mo ntam, mo awo ntoatoaso nyinaa mu. Ɛno na ɛbɛma moahu sɛ me Yehowa na matew mo ho.+ 14 Munni homeda no, efisɛ ɛyɛ kronkron ma mo.+ Obiara a obegu ho fĩ no, wobekum no.+ Obiara a ɔbɛyɛ adwuma saa da no, wobetwa saa ɔkra no afi ne man mu.+ 15 Momfa nnansia nyɛ adwuma, na da a ɛto so ason no de, ɛyɛ homeda, monhome koraa.+ Ɛyɛ da kronkron ma Yehowa. Obiara a ɔbɛyɛ adwuma homeda no, wobekum no. 16 Ɛsɛ sɛ Israelfo di homeda no wɔ wɔn awo ntoatoaso nyinaa mu, efisɛ ɛyɛ daa apam.+ 17 Ɛyɛ sɛnkyerɛnne a ɛda me ne Israelfo ntam daa,+ efisɛ Yehowa de nnansia na ɛyɛɛ ɔsoro ne asase, na da a ɛto so ason no ɔhomee, odwudwoo ne ho.’”+ 18 Afei bere a ɔne Mose kasa wiei wɔ Bepɔw Sinai so no, ɔde Adanse pon abien+ maa Mose, abopon a Onyankopɔn de ne nsateaa+ akyerɛw so.